बिव्यस अध्यक्ष भण्डारीव्दारा २ तथा सदस्य बिक व्दारा १ बिद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण ! – ebaglung.com
२०७५ बैशाख २८, शुक्रबार १८:२५	Top News, थप समाचार
हरिचौरको नवज्योति विद्यालयमा बिद्यार्थी स्वागत र बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न !
गुमानसिँह भण्डारी, गल्काृट २०७५ बैशाख २८ । गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ हरिचौर ठुलाथर स्थित नव ज्योति दुर्गा आधारभूत बिद्यालयमा बिद्यार्थी स्वागत तथा बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बिद्यालयमा नवआगन्तुक बिद्यार्थीलाई स्वागत र कक्षा ८ का बिद्यार्थीहरुलाई बिदाई गरेको बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगेश भण्डारीले बताए । कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले कक्षा १ क मा अध्ययरत सन्दिप बिक र कक्षा ३ मा अध्ययनरत बिनु बिकलाई १ बर्षभरि निशुल्क रुपमा पढाउने जानकारी दिए । त्यस्तै गल्कोट नगरपालिका ६ का वडा सदस्य भिम बिकले कक्षा ८ मा अध्ययनरत पुजा दर्जीलाई निशुल्क पढाउने ब्यवस्था गर्ने बताए ।
गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुको मुल्याङ्कन गरेर १ बर्षभरी लाग्ने खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेका हौ, अध्यक्ष भण्डारीले भने, यसले बिद्यार्थीहरुलाई पढाईतर्फ आकर्षण गर्न मदत गर्नेछ ।
कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक र बिद्यार्थीहरुलाई लागु गर्ने गरि आचार संहिता निर्माण गरिएको छ । बिद्यालयलाई नमुना बिद्यालय बनाउने उदेश्य सहित कक्षा १ को क र ख सेक्सनमा श्रव्य दृष्य सामाग्रीको प्रयोगले अध्यापन गराईने बिद्यालयले जनाएको छ ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाई हुने उक्त बिद्यालयमा हालसम्म ८९ जना बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आईरहेका छन । कार्यक्रम बिद्यालय ब्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष योगेश भण्डारीको अध्यक्षता र शिक्षक तारा माया बिकको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।